မီးဖိုထဲကအရည်ပျော်သံသံမဏိအရည်ပျော်သော induction မီးဖိုနှင့် ferrous သတ္ထု
ပင်မစာမျက်နှာ / induction အရည်ပျော်အရည်ကျိုမီးဖို / သံမဏိသံအရည်ပျော်အရည်ကျိုမီးဖို / သံမဏိအရည်ပျော်သော induction မီးဖို
Categories: လျှပ်စစ်အရည်ကျိုမီးဖို, Igbt induction အရည်ပျော်အရည်ကျိုမီးဖို, induction အရည်ပျော်အရည်ကျိုမီးဖို, သတ္တုအရည်ပျော်အရည်ကျိုမီးဖို, သံမဏိသံအရည်ပျော်အရည်ကျိုမီးဖို Tags: အလွိုင်းသံမဏိအရည်ပျော်မီးဖိုထဲ, သံမဏိအရည်ပျော်သော induction မီးဖိုထဲကိုဝယ်, သံအရည်ပျော်မီးဖိုထဲကိုနှင်ထုတ်, စွမ်းအင်ချွေတာအရည်ပျော်မီးဖိုထဲ, သော induction မီးဖိုထဲအရည်ပျော်စွမ်းအင်ချွေတာရေးသံမဏိ, ferrous အရည်ပျော်မီးဖိုထဲ, မီးဖိုထဲကအရည်ပျော် ferrous သတ္ထု, အရည်ပျော်သံမဏိများအတွက် induction မီးဖိုထဲ, သံသံမဏိအရည်ပျော်သော induction မီးဖိုထဲ, သံမဏိအရည်ပျော်သော induction မီးဖိုထဲ, သံမဏိအရည်ပျော်သော induction မီးဖိုထဲ
Ferrous Metals အရည်ပျော်အရည်ကျိုမီးဖို | သံသံမဏိ induction အရည်ကျိုမီးဖိုအရည်ပျော်
သော induction မီးဖိုထဲ melitng 1) အလတ်စားကြိမ်နှုန်းသံသံမဏိ
2 မြင့်မားသောတိကျမှန်ကန်မှုနှင့်အတူ) အပြည့်အဝဒစ်ဂျစ်တယ်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်အား
3) အရည်ပျော်သံမဏိ, သံ, သံမဏိ, ကြေးနီ, လူမီနီယမ်
4) 0.15-20 တန်ချိန်စွမ်းရည်
5) စဉ်ဆက်မပြတ်ပါဝါ output ကို, မြန်ဆန်အရည်ပျော်, ကောင်းသောလျှပ်စစ်ဓာတ်အားချွေတာထိရောက်မှု။
6) သံမဏိ shell ကိုမီးဖိုထဲဖွဲ့စည်းပုံ, ဟိုက်ဒရောလစ် tilt ။
3.Usage: အဓိကအားဖြင့်သံမဏိ, သံ, ကြေးနီ, လူမီနီယံနှင့်အလွိုင်းအရည်ပျော်များတွင်အသုံးပြုအလတ်စားကြိမ်နှုန်း induction အရည်ကျိုမီးဖို, မြင့်မားသောအရည်ပျော်ထိရောက်မှုနှင့်အတူဖြစ်ပါသည်, အကျိုးသက်ရောက်မှုချွေတာကောင်းသောလျှပ်စစ်မီး, ကောင်းသောသတ္တုအစိတ်အပိုင်းတူညီနေမှု, လျော့နည်းမီးလောင်ရာဆုံးရှုံးမှု, မြန်ဆန်အပူချိန်မြင့်တက်, အပူချိန်၏လွယ်ကူသောထိန်းချုပ်မှုမှသင့်လျော်သည် သတ္တုအရည်ပျော်အမျိုးမျိုးတို့ကို။
1) စဉ်ဆက်မပြတ်ပါဝါ output ကို, မြန်ဆန်အရည်ပျော်, ကောင်းသောလျှပ်စစ်ဓာတ်အားချွေတာထိရောက်မှု။
2) သုည-ဗို့အားသိမ်းကျုံး-အကြိမ်ရေစတိုင်က start, မကြာခဏ start ၏လိုအပ်ချက်မှ adapts ။
ထိုကဲ့သို့သော overcurrency ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, overvoltage ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, လက်ရှိ-ကန့်သတ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, ဗို့-ကန့်သတ်, ရေ-ချိုးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့် default အနေနဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, ပစ္စည်းကိရိယာများအဖြစ် 3) ဘက်စုံကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်တာ, အရည်ပျော်မြန်နှုန်းအာမခံချက်ရဝုဏ်အောက်မှာယုံကြည်စိတ်ချရသောပြေး။
4), လည်ပတ်ရလွယ်ကူအားလုံး ချ. လုပ်ငန်းစဉ်အတွက်သင့်လျော်သော။
တစ်ခုတည်းမီးဖိုအရည်ပျော်အချိန် <40 မိနစ်ကဲ့သို့မြန်စေနိုင်သည်! မီးဖို၏ Power factor အမြဲတမ်းအမြင့်ဆုံးသောပြည်နယ် (≧ 0.96) သို့ရောက်ရှိသည်!
အဆိုပါရောစပ်စဉ်အတွင်းမရှိဘယ်လောက်ပဲမီးဖိုထဲခွအေနအေအပြောင်းအလဲလတ်အကြိမ်ရေ power supply ကိုအမြဲအပြည့်အဝအာဏာကို output ကို။ ဒါကအော်ပရေတာကို manual ညှိနှိုင်းမှု, အဆုံးမှ smelting ထံမှလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးမရှိပဲ, အလယ်အလတ်အကြိမ်ရေ power supply အမြဲတမ်းမီးဖိုထဲမှအများဆုံးပါဝါမကယ်မလွှတ်နိုင်ပါလိမ့်မည်ဟုပြောရန်ဖြစ်ပါသည်။
အလွန့်အလွန်အပြိုင်အဆိုင်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုအညွှန်းကိန်း (530 ကီလိုဝပ်နာရီ / T ကအကြောင်းကိုချပစ်သံ)! 20% အကြောင်းကိုချွေတာဘုံအပြိုင်အင်ဗာတာပါဝါစွမ်းအင်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။
အဆိုပါ Rectifier ၏မြေတပြင်လုံးအလုပ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွက် Full-လှိုင်း Rectifier power supply စီးရီးကိုသုံးပြီးအပြည့်အဝပွင့်လင်း (က diode Rectifier ညီမျှ) ၏ပြည်နယ်အတွက်အမြဲဖြစ်တယ်, ပါဝါကွန်ယက်ပိုမိုမြင့်မားသဟဇာတအခြေခံမျှညစ်ညမ်းမှုထုတ်လုပ်ကြဘူး, အမထိခိုက်ပါဘူး ဓာတ်အားခွဲရုံဓာတ်ပြုပါဝါလျော်ကြေးငွေ capacitor ၏စစ်ဆင်ရေး။
firs-class ကို induction ကွိုင်ဒီဇိုင်းကိုထိရောက်စွာကွိုင်ဆုံးရှုံးမှုကိုလျှော့ချနိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါ induction ကွိုင်စုစုပေါင်းအာဏာ 25% များအတွက်အလတ်စားအကြိမ်ရေမီးဖိုထဲအကောင့်အသစ်များ၏ဆုံးရှုံးမှု, ဒါကြောင့်ကွိုင်၏သိပ္ပံနည်းကျနှင့်ဆင်ခြင်တုံတရားဒီဇိုင်းကိုအထူးအရေးကြီးပါသည်။ အဆိုပါကွိုင်ဒီဇိုင်းတဲ့အခါမှာကျနော်တို့လူမီနီယံကြေးနီအတွက်အရည်အသွေးမြင့် TU1 anoxic ကြေးနီချမှတ်လျက်, ကွိုင်ပူးတွဲအဆင့်မြင့်စီးကူးခြင်းနှင့်အငယ်စားဆုံးရှုံးမှုရှိပါတယ်ရာမြင့်သောငွေအ brazing, ချမှတ်။ insulator တွင်လည်းပစ္စည်းများကိုအလှည့်အကြားထဲထညျ့ကြသည်အလှည့်ရဲ့အကောင်းဆုံးအကွာသေချာစေရန်, insulator တွင်လည်းအဆင့်ကိုတိုးတက်သည်နှင့်အမြင့်ဆုံးလျှပ်စစ်အပူထိရောက်မှုရယူသည်။
တည်ငြိမ်သော & သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး
①Importedမြင့်မားသောဖိအား Carbon-အခမဲ့ရေပိုက်နှင့် 304 သံမဏိညှပ်: အကြမ်းခံ!
②Opticalဖိုင်ဘာဂီယာအင်ဗာတာခလုတ်သွေးခုန်နှုန်း signal ကိုပန်းကန်: Anti-်ရောက်စွက်ဖက်၏အားကြီးသောစွမ်းရည်နှင့်တည်ငြိမ်စစ်ဆင်ရေး
③Theအရည်အသွေးမြင့်မားအထူးမိုးသည်းထန်စွာပလက်ဖောင်း Thyristor, ရေတိုင်ကီ (HengYang မူပိုင်ခွင့်အမှတ်) အအေးစတုရန်းအမျိုးအစားရေ: ကိုအသုံးပြုဖို့ပိုမိုအဆင်ပြေ!
④Customized capacitor: အလျားလိုက်ဖွဲ့စည်းမှု, ဘေးကင်း insulator တွင်လည်းပြင် shell ကို, ထိုမဂ္ဂနီဆီယမ်လူမီနီယံအလွိုင်းပို Anti-ချေးနှင့်ပိုမိုတာရှည်ခံ၏မြင့်အစှမျးသတ်တိကိုသုံးနိုင်သည်။
⑤Conductiveကြေးနီဘား: အကြီးစားထူကြေးနီအပူဆုံးရှုံးမှုကိုလျှော့ချရန်နှင့်စွမ်းအင်ကိုကယျတငျနိုငျ! ကြေးနီမျက်နှာပြင်နဲ့ anti-ဓာတ်တိုးအပေါ်ယံပိုင်း, အအဆက်အသွယ်မျက်နှာပြင်ကိုပိုမိုကူးမှုဖြစ်ပါတယ် sandblasted, သဏ္ဌာန်လည်းညှိုးနွမ်းခြင်းနှင့်ပိုပြီးလှပစေသည်ပါဘူး!
⑥Isolation (လဲလှယ်) switch ကို: မီးဖိုထဲကိုအစားထိုးသို့မဟုတ်ပြင်ဆင်သောအခါကအခြားမီးဖို၏ပုံမှန်လည်ပတ်ထိခိုက်ခြင်းမရှိဘဲတဦးတည်းမီးဖိုထဲ၏တန်ခိုးပျက်ကွက်ထိန်းချုပ်ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်လူ့များ၏ဒီဇိုင်းကို။
⑦Plateအပူလဲလှယ်မှုစနစ် (HengYang မူပိုင်ခွင့်အမှတ်): အဆိုပါပစ္စည်းကိရိယာများအတွက်အအေးရေအပူချိန်ကိုသေချာစေရန်နှင့်ပါဝါဝင်အနေဖြင့်ပြင်ပ hard ရေကာကွယ်တားဆီးဖို့။ ပစ္စည်းကိရိယာများပျက်ကွက် minimize လုပ်ဖို့ဂရုမစိုက်။
ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်သက်ဆိုင်သောလိုအပ်ချက်များကိုပြည့်မီစေရန်လေထုမှတစ်ဆင့်ဖုန်မှုန့်များကိုစုပ်ယူပြီးလေထုမှတစ်ဆင့်ဖုန်မှုန့်ပါးလွှာ (လက်စွပ်)၊ လေမှုတ်ခြင်းနှင့်ဘေးထွက်စုပ်ယူခြင်းအပူ - ထိန်းသိမ်းထားသည့်မီးဖိုအဖုံး၊ အကဲဖြတ်ဒီဇိုင်း။
Power က input ကို (50 / 60HZ) Power က output ကို တစ်ဦးကတစ်တန်ကုန်ကျစရိတ်စွမ်းအင် (ကီလိုဝပ်နာရီ / T) ကို
EAF အမျိုးအစားလျှပ်စစ်မီးဖိုထဲစွမ်းရည် rated ပါဝါ (KW) incoming ဗို့ (V) incoming လိုင်းလက်ရှိ (က) သွေးခုန်နှုန်းအရေအတွက်ကို Rectifying Rectifier Transformer စွမ်းရည် (KVA မဟာ) DC ကဗို့ (V) တိုက်ရိုက်လက်ရှိ (က) အလတ်စားအကြိမ်ရေဗို့ (V) အလယ်အလတ်အကြိမ်ရေ kHz အရည်ပျော်အချိန် (အောင်မင်း) သို့ကာစ်သံ အနီရောင်ကြေးနီ ကွေးဝါ လူမီနီယမ်
GW-0.35T 250 380 4006သုံးအဆင့် 315 500 500 750 1 20-45 560 420 390 540
GW-0.5T 350 380 5606သုံးအဆင့် 400 500 700 750 0.8 30-50 550 410 380 530
GW-0.75T 500 380 8006သုံးအဆင့် 630 500 1000 750 0.8 40-50 550 410 380 530
GW-3T 2000 750 820 12 နှစ်ချက်သုံးအဆင့် 2500 990 1010 1480 0.5 50-70 510 370 340 490
GW-5T 3000 950 1140 12 နှစ်ချက်သုံးအဆင့် 4000 1260 1190 1900 0.3 50-80 500 360 330 480
GW-10T 6000 950 2280 12 နှစ်ချက်သုံးအဆင့် 8000 1260 2380 1900 0.3 50-90 490 350 320 470
GW-15T 8000 950 1520 24 လေးသုံးအဆင့် 10000 1260 1590 1900 0.3 50-90 480 340 310 460
GW-20T 10000 950 1900 24 လေးသုံးအဆင့် 12500 1260 1980 1900 0.25 50-90 470 330 300 450
GW-30T 15000 950 2850 24 လေးသုံးအဆင့် 20000 1260 2980 1900 0.25 50-90 470 330 300 450
မီးဖို၌အပူချိန် - သံမဏိ ၁၆၅၀ ℃သံသတ္တု ၁၄၅၀ ℃ကြေးနီအနီရောင် ၁၁၅၀ 1650 ကြေးဝါ ၁၀၀၀ umin အလူမီနီယမ် ၇၀၀ ℃သွပ် 1450 ℃
※လျှပ်စစ်သံသံမဏိ melitng သော induction မီးဖိုထဲသံမဏိ 7.8 ၏သိပ်သည်းဆအပေါ်အခြေခံသည်၏စွမ်းရည် (လူမီနီယံ၏သိပ်သည်းဆ 2.7 ဖြစ်တယ်, ဒါတန်းတူအလေးချိန်၏လူမီနီယံ: အကိုက်ညီခြင်းပါဝါအတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်, ထိုစွမ်းရည်လိုအပ်ချက်3ကြိမ်မီးဖိုထဲ x ခန္ဓာကိုယ်)
အဆိုပါအရည်ပျော်အချိန်※နှင့်အာဏာစားသုံးမှုတန်ချိန်, ပါဝါ, ကုန်ကြမ်းပုံသဏ္ဍာန်, ကုန်ကြမ်းသိပ်သည်းဆ, အလုပ်သမားကျွမ်းကျင်မှုကိုက်ညီသည့်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အတူအရေးကြီးသောဆကျဆံရေးရှိ
above အထက်ပါပုံစံတွင်“ တန်ချိန်ပါဝါစားသုံးမှု (kwh / T)” သည်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုအသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးလျှင် IF ၏စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု၏ ၁၅% နှင့်ထိုထက်မကကိုစားသုံးလိမ့်မည်။
※သံမဏိ melitng သော induction မီးဖိုဖွဲ့စည်းမှုပုံစံ - အလယ်အလတ်ကြိမ်နှုန်းပါဝါထောက်ပံ့မှု၊ capacitor ကက်ဘိနက်၊ မီးဖိုချောင်ကိုယ်ထည် (သံမဏိကိုယ်ထည်သို့မဟုတ်အလူမီနီယံအခွံ)၊ ဟိုက်ဒရောလစ်ဘူတာ (သို့မဟုတ် reducer) စောင်းခြင်းစနစ်၊
အဆိုပါအထက်စံထုတ်ကုန်ဒေတာဖြစ်ပါတယ်※, အသုံးပြုသူဝယ်လိုအား, ကွဲပြားခြားနားသောအရည်ပျော်မြန်နှုန်းနှင့်အတူ Non-စံထုတ်ကုန်နှင့်အညီကွဲပြားခြားနားသောအာဏာကိုဒီဇိုင်းနိုင်ပါတယ်။
ကြေးနီ, ကြေးဝါအရည်ကျိုမီးဖိုအရည်ပျော်အလတ်စားကြိမ်နှုန်း induction